Chii chinonzi Programmatic Kushambadzira & Kushambadzira? | Martech Zone
Chishanu, June 12, 2015 Muvhuro, October 12, 2015 Douglas Karr
Tekinoroji yekutengesa iri kufambira mberi izvozvi uye vanhu vazhinji vanogona kunge vasingatombozviziva. Dhijitari midhiya yakatanga nekutaurirana uye midhiya-centric kushambadzira. Muenzaniso ungave wekuti kambani inogadzira hurongwa hwayo hwemukati, kutengesa, kushambadza uye tsamba. Ivo vanogona tweak uye nekukwenenzvera ivo kuti vatakurwe uye akakwana kudzvanya-kuburikidza chiyero, asi zvakanyanya kana zvishoma zvirimo zvakapihwa pane iyo purogiramu yebhizinesi - kwete iyo inotungamira kana mutengi.
Kushambadzira otomatiki kwakaunza mukana wekuparadzanisa vatengi vako mumunhu akasarudzika, kukudziridza zvemukati zvakanangana navo - kunyangwe zvakagadziriswa, nekuzvitumira kwavari pane yakarongedzwa purogiramu iyo inokonzeresa maitiro avo anozotarisa zvinotevera zvinotevera. Mune mamwe mazwi, iyo nhoroondo uye hupenyu hwehupenyu hwaive huchiri kunyanya kutsamira pamusika. Chokwadi, yaive yakavakirwa pakutsvagurudza kwakawanda uye kuongorora… asi mutengi zvakadaro anga asiri iye anotungamira nzira yavo yekutendeuka.
pinda big data. Iko kugona kwekushandisa muchina kudzidza uye kuongorora data mune chaiyo-nguva kuri kubvumidza kushambadzira tekinoroji mhinduro kukudziridza dzinofungidzira maitiro neakanyanya kurongeka. Iye zvino mutengi anogona kudzikamisa kuburikidza nehupenyu hwavo hwega hwega uko shanduko dzisinganzwisisike mukuzvibata kwese kwese kusangana, kubatanidzwa pamhepo, nharembozha uye zvemagariro zvinogona kuvafambisa munzira yekutendeuka. Kufambira mberi kunonakidza uko pasina mubvunzo kuchachinja kushambadzira, kuwedzera kudzoka mukudyara, uye kudzikisira kusundira nekukwevera kusagadzikana kwatinowanzoisa pane zvatinotarisira uye vatengi.
Chii chinonzi Programmatic Kushambadzira
izwi Zvirongwa zvemidhiya (Aizivikanwawo kushambadzira kwepurogiramu or programmatic kushambadzira) inosanganisira huwandu hwetekinoroji iyo inoshandisa kutenga, kuisa, uye kugadzirisa kweyemidhiya hesera, ichitsiva nzira dzevanhu. Mukuita uku, kupa uye kuda vanobatsirana vanoshandisa otomatiki masystem nemabhizinesi mitemo kuisa kushambadza mune zvemagetsi zvakanangwa midhiya hesera. Izvo zvakataurwa kuti programmatic midhiya chiitiko chinokurumidza kukura mune yepasirese midhiya uye yekushambadzira indasitiri. Wikipedia.
Kushambadzira ikozvino kwave kuwanikwa kune ese ezvenhau enhau. Mhinduro yega yega ine yayo yakasarudzika-inogadziriswa yekutarisa sarudzo inoenderana neprofile, hunhu, nzvimbo, kana kunyange chishandiso. Izvi zvinopa mukana wevashambadziri kukudziridza kushambadzira kunofamba netarisiro kuburikidza nekushandurwa. Uyu mukana wakakwidziridzwa zvakanyanya kubhidha uye mukana wenguva pane nyore kudzokorora zvirongwa.
Zvirongwa zvekushambadzira inobvumidza mushambadzi kumisikidza kushandisa chikuva kuti agadzirise zvese zviri kunangidzirwa, kubhidha uye kuuraya kuwedzera kudzoka mukudyara. Huwandu hwevatungamiriri hunogona kukwidziridzwa nepo mutengo wega wega unogona kuramba uchigadzirisirwa mari shoma yaunoshandisa. Anopa imwe yemapuratifomu akadaro.
Kugadziriswa kwekubhidha masystem anga aripo kwenguva yakati, asi aigara achiomarara uye asingavimbike. Panguva yawakafungidzira kuti chii chakange chakashata nezvirongwa zvako, unogona kunge wakarova bhajeti yako. Kufambira mberi muhunyanzvi hwedata pamwe nekuwanda kwedhatisheni data kuri kugonesa chizvarwa chitsva chemapuratifomu ekushambadzira epasi anoderedza njodzi programmatic kushambadzira yakabatana nemaitiro ezuro. Zvemagariro midhiya kushambadzira mapuratifomu zvakanyanya kubatsira kushambadzira kwepurogiramu nekuda kwekuchinjika kwavo uye huwandu uye kuwanda kwedata kunowanikwa.
Yieldr's ichangoburwa infographic inosimbisa shanu dzemasocial network makuru uye mabhenefiti ekuvasanganisa nehurongwa hwepurogiramu.
Tags: otomatiki kubhidhabig dataDataprogrammatic kushambadzirakushambadzira kwepurogiramuprogrammatic midhiyasocial media ad mutengisocial media shambadziro inotengasocial media adssocial media advertisingdata rezvemagariromuridzi
Kukadzi 1, 2016 na5: 04 PM
iri kupi Big Data irikubva kunozotungamira kushambadzira kwepurogiramu?
Kukadzi 1, 2016 na8: 01 PM
Peter, mubatanidzwa wepa-peji rehunhu hunhu hwakatorwa nevechitatu-bato mapuratifomu, kure-saiti huwandu hwevanhu uye data rakasimba, mitsara yemagariro, nhoroondo yekutsvaga, nhoroondo yekutenga uye chero imwe sosi. Iwo makuru epuratifomu mapuratifomu ikozvino anobatana uye anogona kuona vashandisi kuyambuka-saiti uye kunyangwe muchinjikwa-chishandiso!